RED ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံသည် RANGER Camera System သို့ဟီလီယမ်နှင့် GEMINI အာရုံခံရွေးစရာများထည့်သွင်းသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Rangers ကင်မရာစနစ်စေရန်အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံကထပ်ပြောသည်ဟီလီယမ်နှင့် Gemini အာရုံခံ Options ကို
အနီရောင် DIGITAL ရုပ်ရှင်ရုံ®က၎င်း၏ဆုရHELIUM® 8K S35 နှင့်GEMINI® 5K S35 အာရုံခံကိရိယာဟာအနီရောင်RANGER®ကင်မရာဂေဟစနစ်သို့ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားသစ်နှစ်မျိုးရွေးချယ်စရာပိုမို modular အနီရောင်DSMC2®ကင်မရာတစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံ, All-In-One system ကိုပိုနှစ်သက်သူကိုဖန်တီးသူတစ်ကြံ့ခိုင် lineup ဖန်တီးပါ။ အဆိုပါ Rangers ဟီလီယမ် 8K S35 နှင့် Rangers Gemini 5K S35 ငှားရမ်းအိမ်များပါဝင်, ပြန်လည်ရောင်းချသူများ၏အနီရောင်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုမှတဆင့်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်, တိုက်ရိုက်အနီရောင်မှတဆင့်။ အဆိုပါကင်မရာများစက်တင်ဘာလ 13-17 မှစ. , RAI အမ်စတာဒမ်မှာ Elicium ၏စတုတ္ထအထပ်ပေါ်တွင်အနီရောင်အစည်းအဝေးခန်း၌ IBC မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မည်။
High-end ဘဏ်ဍာ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်း, အအနီရောင် Rangers MONSTRO 8K VV ကောင်းစွာယင်း၏ပစ်လွှတ်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကကတည်းကရိုက်ကူးရေးအားဖြင့်လက်ခံရရှိနှင့်တစ်ဦးငှားရမ်းအိမျသာထုတ်ကုန်ဖြစ်နေဆဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအနီရောင် Rangers ကင်မရာစနစ်၏အားလုံးသုံးအာရုံခံကိရိယာမျိုးကွဲ (ဘက်ထရီပေါ် မူတည်. ) 7.5 ပေါင်ဝန်းကျင်အလေးချိန်သည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, စံကင်မရာကိုယ်ထည်၏တူညီသောအကျိုးခံစားခွင့်များပါဝင်သည်။ အဆိုပါစနစ်အားလည်းအာဏာဆာလောင်မွတ်သိပ် configurations ကျေနပ်ဖို့မိုးသည်းထန်စွာ-တာဝန်ပါဝါသတင်းရင်းမြစ်ကိုကိုင်တွယ်နှင့်တိတ်ဆိတ်ပိုမိုထိရောက်အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ပန်ကာဝါကြွားနိုင်ပါ။
အဆိုပါအနီရောင် Rangers ကင်မရာစနစ်ကနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောရူပတစ်ပြိုင်နက် output ကိုဖြစ်ခွင့်ပြုသုံး SDI ရလဒ် (ထင်ဟပ်နှစ်ခုနှင့်တစ်လွတ်လပ်သော) ၏ပါဝင်သည်; ကျယ်ပြန့်-input ကိုဗို့အား (11.5V မှ 32V); 24V နှင့် 12V ပါဝါတနေရာ (တစ်ဦးချင်းစီ၏နှစ်ခု); တဦးတည်း 12V, P-Tap; ပေါင်းစည်း 5-pin ကို XLR စတီရီယိုအသံ input ကို (လိုင်း / မိုက်ကရိုဖုန်း / + 48V selection); အဖြစ် genlock, timecode, ကို USB နှင့်ထိန်းချုပ်မှု။ နှစ်ဦးစလုံး V-Lock ကိုနှင့်ရွှေတောင်ပေါ်မှာဘက်ထရီရွေးချယ်စရာထောက်ခံနေကြသည်။
အားလုံးလက်ရှိအနီရောင်ကင်မရာများနှင့်အတူသကဲ့သို့, Rangers တစ်ပြိုင်နက် REDCODE RAW ပေါင်း Apple က ProRes မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်သို့မဟုတ် လွန်စွာလိုလားသော 300 MB / s ရေးအမြန်နှုန်းအထိမှာ DNxHD သို့မဟုတ် DNxHR ။ ဒါဟာအစမြှင့်တင်ရန် image processing တွင်ပိုက်လိုင်း (IPP2) နဲ့အနီရောင်ရဲ့အဆုံးမှအဆုံးသို့အရောင်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာတိုက်လုပ်ငန်းအသွားအလာပါရှိပါတယ်။
အနီရောင်ယခုအကြောင်းအရာဖန်တီးသူပိုပြီးဖန်တီးမှုရွေးချယ်မှုပေးနှစ်ခုသီးခြားပေမယ့်အညီအမျှအားကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန် lineup ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ DSMC2 ဂေဟစနစ်၎င်းတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်း configuration options ကိုအတူရိုင်းကို run ဖို့ခွင့်ပြု, အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တန်ဖိုးထားသောအသုံးပြုသူများအတွက်အရှိဆုံးပြောင်းလဲနေသောနှင့်မော်ဂျူလာရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာများကိုဆက်လက်။ အနီရောင် Rangers တစ်လျော့နည်းရှုပ်ထွေးပြီးပိုပြီးစံချိန်စံညွှန်းမီအခြားရွေးချယ်စရာကြိုက်တတ်တဲ့သောသူတို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံ option တစ်ခုဖြစ်သည်။
"ဈေးကွက်ဖို့ Rangers MONSTRO ရောက်စေဖို့ငှားရမ်းအိမ်များနှင့်အတူပူးပေါင်းတှငျကြှနျုပျတို့နှစ်ခုအသစ်သောမျိုးကွဲဖှယျ, ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အကြီးအတုံ့ပြန်ချက်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ," အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံကသမ္မတ Jarred မြေကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ညျဘဏ်ဍာတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အမျိုးမျိုးဖို့ Rangers လိုင်း-up, ပူဇော်နှင့်ဖန်တီးသောအံ့သြဖွယ်ပုံရိပ်တွေကိုမြင်လျှင်မျှော်ကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ "
နှင့်အတူပြည့်စုံ Rangers ဟီလီယမ်နှင့် Rangers Gemini သင်္ဘော:
ရှိန်းပြား PL တောင်မှာ
နယူး LCD ကို / တိုးတက်လာသော cable ကိုလမ်းကြောင်းနှင့်အတူ EVF Adapter ကို: D ကင်မရာ၏လက်ဝဲဘက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသည့်အခါ
24V ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဘက်ထရီတို့နှင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည့် 3-pin ကို 24V XLR ပါဝါကေဘယ်လ်နှင့်အတူနယူး 24V AC ပါဝါအဒက်တာ,
မှန်ဘီလူးရှိန်းပြား pack ကို mount
လိုက်ဖက်တဲ့ hex နှင့် Torx tools များ
ထို့အပြင်အနီရောင်မိတ်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်ထား ကို Canon Rangers ဟီလီယမ်နှင့် Rangers Gemini နှစ်ဦးစလုံး၏ EF တောင်ပေါ်မှာမူကွဲဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း။
နှစ်ခုအသစ်သောမျိုးကွဲများအတွက်စျေးနှုန်း $ 29,950 / € 27,450 / £ 24,750 Rangers ဟီလီယမ်အဘို့နှင့် $ 24,950 / € 22,850 / £ 20,650 Rangers Gemini အဘို့ဖြစ်၏။
ကိုသွားပါ www.red.com/red-ranger နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်, သို့မဟုတ်သင့်ဒေသခံသွားရောက်ကြည့်ရှု အနီရောင် Authorized ရောင်းဝယ်ရေး.
လွန်စွာလိုလားသော ကင်မရာများ ရုပ်ရှင်ပညာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor အနီရောငျ အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC TVU ကွန်ယက် 2019-09-09
ယခင်: Dolby Atmos လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ Periscope Post ကို & Audio စျေးပြဇာတ်ရောသမအဆင့်
နောက်တစ်ခု: Medialooks IBC2019 မှာ Market ကအဆင့်မြှင့် Software Development Tools များဆောင်ကြဉ်း